Retnye zighachiri M? | Martech Zone
Retnye zighachiri M?
Tọzdee, Septemba 9, 2010 Sunday, July 5, 2015 Douglas Karr
Bọchị ole na ole gara aga ndị mmadụ jụrụ m, kedu ka m ga-esi mata onye weghachitere m? Mgbe ndị folki na-eji njirimara retweet n'ime Twitter, ọ dị mfe. Banye na Twitter nwere ike pịa Retweets na igodo aka nri. Kọlụm nke atọ bụ Tweets gị, Retweeted ma na-enye gị ndepụta nke Tweets gị niile ndị e degharịrị na ndị mere ya.
E nwekwara otu API kpọọ iji jide retweet data maka tweet nyere. Retweeting bụ ọrụ kwesịrị nsuso… ọ bụrụ na mmadụ na-akwalite ọdịnaya gị, ị nwere onye na-akwado gị ma ọ bụ akara gị. Nke ahụ bụ onye ị nwere ike ọ bụghị naanị ịchọrọ iso, mana onye ịchọrọ ịchọ mmekọrịta miri emi!
Na-akwado: Twitter bụ ụzọ dị mma iji dọta ọtụtụ eyeballs na ozi ịre ahịa gị - mana imirikiti ndị mmadụ amaghị ihe ha na-eme wee mechie azịza ọ bụla. Ma ọ bụ na ha enweghị ndị na-eso ụzọ zuru oke, ma ọ bụ ha zipụ ozi na-ezighi ezi n'oge na-ezighi ezi ma ọ bụ mee otu ma ọ bụ karịa nke ọtụtụ mmejọ na-egbu egbu. Pịa ebe a ịmụta otu esi eme ka Twitter na-esote ka ọ dị mfe ma dịkwa mma.
Tags: retweetOnye weghachiteonye weghachite m
Drip Marketing Nkebi nke 2: A Suụla.
Sep 10, 2010 na 2:32 PM
Ọ dị ntakịrị aghụghọ atọ. Daalụ maka ikenye Doug!
Jenụwarị 20, 2011 na 11:46 PM
Na-adịkarị mma ịhụ akwụkwọ ochie na-ebi na ụyọkọ Tweets! Kedu onye weghachite ya? 😉
Ndewo nwunye, mgbe m pịrị na nke m nke dị na ngalaba ndị ọzọ reTweeted, ọ nweghị ndepụta ọ bụla nke onye degharịrị ya dịka ọ na-eme. Ọ bụla echiche mere? ma obu kedu ka m ghota onye obu?
Mee 25, 2011 na 4: 06 AM
Anọ m na-agụ na ọ nwere ike ịbụ na ndị ị na-anaghị eso na ndị na-echebe tweets ha zigharịrị ya
Jul 9, 2011 na 1: 16 AM
ya mere kedu ka ngwa a si arụ ọrụ
Jul 9, 2011 na 2: 20 AM
Ọ bụghị ngwa, Karberney, ọ bụ n'ezie atụmatụ n'ime dashboard Twitter.
chei ihe iberibe furu efu.
felata ụfọdụ, saa ahụ, bepụ afụ ọnụ gị jọgburu onwe ya, nke kachasị mkpa, kwụsị ikwu ụdị nzuzu dị otú ahụ iberiibe na nke ka njọ, tinye ya na ntanetị. Iberibe onye nzuzu
I nwekwara ike iji http://www.tweetreach.com, http://www.sharedcount.com, http://www.whotweetedme.com, na otu n’ime ihe ndị a na-atụghị anya na ọ ga-achọpụta onye weghachite na ị ga - abụ onye ndụmọdụ maka Avenue Avenue ‘Kesley’.